Maqaal: Shabakada BOI oo ku tilmaantay Kesari Akshay Kumar filimkiisa ugu weyn uu sameeyo dhanka saameynta! – Filimside.net
Maqaal: Shabakada BOI oo ku tilmaantay Kesari Akshay Kumar filimkiisa ugu weyn uu sameeyo dhanka saameynta!
Superstar Akshay Kumar 28-sano ayuu fanka Hindiya ka tirsan waana atoore awood badan oo weli suuqa ka iibin karo fariin walbo uu la imaado waxaana berito loo soo bandhigi doonaa goos gooska filimkiisa Kesari oo la daawan doono 21 Maarso 2019.
Hadabba maantada hore kuwa filimada ka faaloodaan ayaa amaan lixaad leh kala dul dhaceen goos gooska filimka Kesari kuna tilmaameen mashruuc weyn oo si caalami ah loo sameeyay hubaal ahaana Hindiya ku faani doonaan fariinta weyn ee King Kumar u diyaarsan.
Shabakada Boxoffice India (BOI) ayaa dhankeeda amaanta dhinac kasoo gashay inkastoo shabakad dhex dhexaad tahay haddana marka ay si hordhac ah shaqaalaheeda goos gooska Kesari u daawadeen durba maqaal ay filimkan hadal heyntiisa sare ugu qaadayaan kalsoonida laga qabo inuu Boxoffice-ka gil gilo.
Kesari – Waa Filimka Ugu Weyn Hadal Heyn Ahaan Iyo Tayo Ahaan Ee Akshay Kumar Sameeyo waa ciwaanka ay dooratay BOI inay u adeegsato waxa filimka Kesari laga filan karo.
Waa markii ugu horeesay Akshay Kumar doorto fariin siweyn loo dhigay wax walbana laga filan karo horey wuxuu sameyn jiray aflaan aan waqti badan la galinin oo muuqaal ahayn filim weyn laakiin Kesari waa filim weyn oo si caalami ah loo sameeyay waana filimka uu Akshay u baahnaa in awoodiisa ganacsi balaarato.
Kesari waa filim goos gooskiisa saameyn adag xambaarsan sidoo kalena daawadayaasha berito ka yaabin doono lana qiri doono Kumar inuu lasoo socdo fariin Hindiya oo dhan qabsan doonto waa haddii aan wax ku cabirno qaabka goos gooska loo dhigay oo ka muuqato filimkan mid weyn inuu yahay.
Kesari si ka duwan aflaanta Akshay Kumar sameeyay 25-ka sano ugu dambeesay ayaa loo sameeyay waa filim weyn oo dadka oo dhan soo jiidan doono. Xoogaa halka caqabad filimkan qabsan karto ayaa ah in Punjab lagu duubay sidoo kalena jilaayaasha Sikh ama Sardar ku jilayaan laakiin midaas waxaa meesha ka saareyso in filimkan ciidam Afghanistan ah oo Hindiya kusoo duuleen reer Punjab la dagalayaan sidaa darteed dadka Hindiya oo dhan wey daawan doonaan.
Kesari daawashadiisa waxaa lagu soo beegay xili wadaninimada Hindiya meel sare mareyso madaama xasarad Pakistan kala dhaxeyso taagan tahay sidaa darteed Akshay filimkiisa wuu u eg yahay mid fariin wadaninimo qiiro badan xambaarsan oo dadka sii kicin doonto.
Filimka Kesari waxaa Director ka ah Anurag Singh oo horey u sameeyay filimo Punjabi ah filimada uu sameeyay waxaa ugu sheeko wanaagsan filimka qiirada badan Punjab 1984 haddii Akshay filimkiisa Kesari qiiro adag yeesho waa hubaal inuu Hindiya qabsan doono.
Kesari waxay u badan inuu noqon doono Akshay Kumar filimkiisa lacagaha ugu badan soo xareeyo oo darajo dheeraad ah gaarsiiyo madaama uu filim weyn yahay qaab weyna loo dhigay, goos gooska berito Hindiya wuu qabsan doonaa halka fariinta filimkan tiyaatarada Hindiya qabsan doono 21-ka Maarso marka masraxa lasoo saaro.
Aqriste Sidee Kula Tahay Hadal Heynta Filimka Kesari Iyo Waxa Laga Filan Karo?
Abdinasir Seyruuq says:
Waxaan aaminsanhay in Uu noqon doono filmka Akki ugu weyn Oo Sameeyay Waxaana u rajeyhaa in blockbuster weyn noqdo
Guul ayaan urajeynayaa Akki waa actor dhinackaste ka dhameystiran kaligii duulna ah